Akụkọ - ential nwere ezigbo ndị otu na-ewuli elu
Dika onodu nwere atumatu ulo ndi otu mara mma, Beajom weputara uzo ahia na ndi injinia oru na atumatu oru na oge mgbụsị akwụkwọ 2020 nke oge ngụsị akwụkwọ nke mahadum na 16th Ọkt 2020 na Mahadum Jiaxing. Ihe karịrị ụmụ akwụkwọ ndị ọkachamara 600 sitere na ndị ọrụ ibe dị iche iche sonyeere nzukọ ịgba ajụjụ ọnụ.
Lelee ọnọdụ nke ogige agụmakwụkwọ.
Ndị gụsịrị akwụkwọ na mahadum nọ na mahadum
Dika nghazi ndi mmadu Beajom, onye isi oru HR weputara atumatu ọzụzụ puru iche maka ndi oru ohuru ndi guru akwukwo na 2020. Ya bu mmemme 7 7 7 7 (7 awa-7 ụbọchị-7 izu)
N'ime awa asaa mbụ, onye nkụzi sitere n'aka HR ga-eduzi usoro ọrụ nlekọta ọfịs. Ebumnuche bụ ime ka onye ọrụ ọhụrụ ahụ mara ngwa ngwa na ndị otu CSR na ọnụ ọgụgụ ndị otu ahịa.
Ọrụ otu na-abụkarị nrụgide dị ukwuu na mkpụrụ ndụ ụlọ ọrụ Beajom. Anyị na-akwado ọdịbendị na-ekwu okwu na-arụ ọrụ na akwụkwọ edetu mgbe onye ọ bụla na-enwe mgbagwoju anya n'okwu nkà na ụzụ ma ọ bụ mkparịta ụka ozi. Kdị ụdị ọrụ a na-eme ka ọrụ otu ahụ ghara ịrụ ọrụ nke ọma.
Dị ka usoro ọzụzụ nke usoro nke abụọ, anyị ga-eduga ndị ọrụ ọhụrụ anyị ka ha mụta ihe site na ogbako na ụbọchị 7 na-esonụ, iji ghọtakwuo usoro anyị na usoro njikwa mma. Mgbe ahụ ka mma ịmara ebe anyị na-ere nke ngwaahịa Beajom.
Nabata usoro ihe nrụpụta na akụrụngwa na saịtị igwe nri.
Jiri nlezianya lelee isi njikwa njikwa ọ bụla. N'ikpeazụ chebe enweghị ndabara ọ bụla ahapụghị na nrụpụta ọrụ.
Dị ka nke atọ, anyị nyere ohere maka ndị ọrụ ọhụrụ ka ha mụta ihe na FGI (ngwongwo ngwongwo agwakọtara) na-achịkwa na ndị ahịa AR na-elele anya oge niile iji bụrụ nkọwapụta ọrụ ngwa ngwa nke CSR na ọnọdụ ọrụ. A mnyocha oge mnwale akụkọ mgbe izu asaa na-agbanwe ọnọdụ ọnọdụ mmụta, ga-eduga ndị ika anyị ugbu a n'ụzọ iji bụrụ ọkaibe na ọrụ ọhụrụ ahụ.